Telestream မှထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုအရည်အသွေးအပြည့်အ ၀ ရရှိခြင်းမှနယူးယော့ခ်ရှိ NAB တွင်ပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NAB နယူးယော့မှာအရည်အသွေး-ရဖို့သေချာ Delivery မှထုတ်ကုန်များနှင့်စားသုံးမိရာမှန်ဆောင်မှုများ၏ Telestream ဟန်ပြနောက်ဆုံး lineup
NAB နယူးယော့မှာအရည်အသွေး-ရဖို့သေချာ Delivery မှထုတ်ကုန်များနှင့်စားသုံးမိရာမှန်ဆောင်မှုများ၏ Telestream ဟန်ပြနောက်ဆုံး lineup
နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား, အောက်တိုဘာလ 7th, 2019 - NAB Show ကိုနယူးယော့မှာ (ပြခန်း N337), Telestream, ဖိုင်-based မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestration, မီဒီယာ streaming များနှင့်ပေးပို့နည်းပညာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ကြည့်ရှုသူဖန်သားပြင်မှကင်မရာမှန်ဘီလူးကနေဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း၌ရှိသမျှသောရှုထောင့်ထိထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အကွာအဝေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Netflix, Google နဲ့ Amazon ကတူသောမျိုးဆက်သစ်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်အကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်တစ်ဦးထက်သာလွန်ကြည့်အတွေ့အကြုံကိုပေးခွငျးအားဖွငျ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားရန်အဘို့အတစ်လမ်းအဖြစ် 4K / UHD နည်းပညာ၏လျင်မြန်သောကလေးမွေးစားမောင်းနှင်နေကြသည်။ HDR နှင့်အတူ 4K / UHD အတွက်အကြောင်းအရာပို့နေတဲ့ကိုကျော်အတွေ့အကြုံကြည့်ရှုဗီဒီယိုမှအကြီးဆုံးသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဆယ်စုနှစ်-နှင့်ဤအပြောင်းအလဲအသစ်များကိုကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်လိုအပ်နေဆဲ။ 4K ဖို့အကူးအပြောင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်အားလုံးအချက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ, အော်ပရေတာ, အယ်ဒီတာများနှင့် colorists ရောနှောသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဘယ်လို dictate လိမ့်မည်ဟုအသစ်နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောစံချိန်စံညွှန်းများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရပါမည်။
အဆိုပါ, ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းယုံကြည်မှုစောင့်ကြည့်မှုမှတဆင့်, တည်းဖြတ်နေစဉ်အတွင်းတစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် PRISM စောင့်ကြည့်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပလက်ဖောင်းအိုင်ပီ, SDI နှင့်ပတျသကျစပ် Workflows များအတွက်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ် HD, 4K, HDR နဲ့ WCG (ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်) ။ PRISM အကျွမ်းတဝင်နားလည်ရန်လွယ်ကူဂရပ်များနှင့်အတူ IT နှင့်အင်ဂျင်နီယာအကြားဆက်သွယ်ရေးရိုးရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအယူမှားအရောင် HDR ကိုတိုင်းတာခြင်း, ကိရိယာများနှင့် 25G ကွန်ရက်များအဘို့ထောက်ခံမှုအဖြစ်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး, PRISM ထုတ်လွှင့်ထရပ်ကားများ, ပြင်ဆင်ရန်အခန်းများနှင့်ပိုပြီးပြင်ပမှာ, စတူဒီယိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးထူးခြားစွယ်စုံနှင့်အနာဂတ်-proofed တိုင်းတာခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးရမိအဖြစ်မီဒီယာ postproduction ရန်၎င်း၏လမ်းကို Telestream'' s ကို Vantage မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်း features တွေစားသုံးမိ, မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပြည့်စုံ postproduction လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက် automated ။ Vantage ယနေ့ထိပ်တန်းမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်မည်သည့် format နဲ့ content တွေကိုပြင်ဆင်မှုချောမွေ့ကူညီပေးသည်။ post ကို Workflows, အများအတွက် Vantage မီဒီယာ Manager ကို Mac နဲ့ Windows-based ဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့တစ်ခုလွယ်ကူသော UI ကို, preview ကို browse tag ကိုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတင်ပြရန်ပေးပါသည်။ Vantage, ရှိသမျှနောက်ဆုံးပေါ် 4K + ကိုင်တွယ်နေစဉ်, HDR နဲ့ Dolby Vision ၏ပုံစံများ GPU ကိုအရှိန်မြှင့် multiscreen transcoding နှင့်အလိုအလျောက်အကြောင်းအရာစည်းဝေးပွဲကိုပေးပါသည်။ IMF ကအတွက်နောက်ဆုံးသခင်ပို့ဆောင်အဖြစ်အားလုံးအရင်းအမြစ် VOD နဲ့ multi-platform ကိုဖြန့်ဝေဘို့လိုအပ် variants Vantage အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်ပိုင်ရှင်များအတွက်မရှိမဖြစ် tool ကိုမှန်ကန်စေသည်။ မီဒီယာနေထိုင်ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. Vantage ကိုအလိုအလျောက်မိုဃ်းတိမ်ကနေတစ်ဆင့်အတွင်းကို process နိုင်ပါတယ် Vantage တိမ်တိုက်ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ်ဝုဏ်အပေါ်အပေါင်းတို့, အလုပ်အကိုင်အနှုန်းအများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလိုက်နာဖို့ဒီဇိုင်း client ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
automated လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလည်းနှင့်အတူအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမှသက်တမ်းတိုး Vidchecker နှင့် aurora ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့် rework နှင့်ဆက်စပ်မည်သည့်အလားအလာကုန်ကျစရိတ်ချွေတာဖိုင်ကို-based QC နှင့်ပြင်ဆင်ချက်ပေး။ အချက်ပြမှုများ OTT, Multiscreen, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရာ linear တီဗီများအတွက်ခေါင်းအဖြစ်, Telestream iQ နှင့် ကင်းစောင့် ဖြေရှင်းချက်ပေးပို့ကွင်းဆက်၌ရှိသောအမှတ်မှာအရည်အသွေးနှင့်ရရှိနိုင်မှုအပေါ်ပြည့်စုံသောတုံ့ပြန်ချက်ပေးဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ် virtualized စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှသောဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံကိုအာမခံပါသည်။
"အရည်အသွေးအမြဲကျနော်တို့မှာပြုပါအရာအားလုံးကိုမှဗဟိုခဲ့ Telestream"ဖြစ်သူ Scott Puopolo, CEO ဖြစ်သူမှာပြောပါတယ် Telestream။ "ကျနော်တို့ရာ၌ခန့်ထားပြီတိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မီဒီယာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဇာတ်စင်မှာအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးအ output ကိုရှိသည်သေချာစေရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုပိုက်လိုင်းများတည်ဆောက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Telestream အဓိကမှာထုတ်ကုန်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲအဖြစ်, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲကတစ်ခုယနေ့ကြည့်ရှု OTT ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏ platform ပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်, မပြတ်မတောက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဖြစ်ပါသည်။ Telestream နှင့်အတူတိုက်ရိုက် streaming များအတွက်လမ်းကိုဦးဆောင်နေသည် OptiQ ု့ကပ်ရေးတစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်-ဇာတိ 282 ပထဝီဒေသများကျော်အတွက် 100 အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကိုရရှိနိုင်မှုဇုန်ကိုဖြတ်ပြီးစကေးမှာတိုက်ရိုက် ABR စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏မကြုံစဖူး Real-time ဖြန့်ကျက်ပေးထားသည့်စနစ် (အထူးသနှင့်ပလက်ဖောင်း Agnostic မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး။ ) မိုဃ်းတိမ်ကိုန်ဆောင်မှုများ၏ဤ set ကိုအသုံးပြုခြင်းအသုံးပြုသူများသည် dynamically Real-time ကိုဗီဒီယို QoE ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် CDN ပေးပို့ကွန်ယက်ကို QoS စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပြည့်စုံအမြင်နှင့်အတူစောင့်ကြည့်ရေးစီမံကိန်းများကိုတက်လည်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလစာ-အဖြစ်-you-go စျေးနှုန်းမော်ဒယ်အလျင်အမြန်ဆင်း swarm ယူဖြစ်လျှင်, ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှတ်နဲ့အထူးသဖြင့်ပြဿနာစီးသို့မဟုတ်ရရှိမှုဇုန်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားအပေါ်၎င်းတို့၏စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပတ်ဝန်းကျင်စကေးနိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်နှင့်ပင် "swarm" task ကိုပြည့်စုံ-အားလုံးသာတက်ကြွစွာရဲ့အချိန်ကိုများအတွက် system အတွက်ပေးဆောင်နေချိန်တွင်အခါ။ OptiQ Channel ကို ချက်ချင်းအသစ်အ OTT ချန်နယ်များကိုဖန်တီးရန်အဖွဲ့အစည်းများနိုင်ပါတယ်။ OptiQ Channel ကို cloud-ချထားအခြေခံအဆောက်အအုံကနေတိုက်ရိုက်လွှ programming ကိုဖြစ်ပေါ်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်, ဘက်ပေါင်းစုံဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နောက်မျိုးဆက် "Self-သည်အနာပျောက်စေသော" လိုင်းများမှဦးဆောင်ပြုလုပ်သောအကြောင်းအရာများကို-သတိထားအပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝင်သည်။
၏နောက်မျိုးဆက် အတွက် Wirecast ဂီယာ, Telestream'' s ကိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်က streaming ဆုရတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုမှာပြသပါလိမ့်မည် Broadfield တဲ (N121) ။ အတွက် Wirecast ဂီယာရဲ့အသစ်ဟာ့ဒ်ဝဲယခင်မျိုးဆက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးကိုယ်စားပြုတယ်။ ပိုပြီး CPU ကို cores, ပိုမိုမြင့်မားနာရီအမြန်နှုန်း, ပိုမိုမြန်ဆန် RAM နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် NVMe သိုလှောင်မှုနှင့်အတူအတွက် Wirecast ဂီယာက၎င်း၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းကမ်းလှမ်းခဲ့အမြင့်ဆုံးဖျော်ဖြေ turnkey စနစ်ဖြစ်သည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး 2019-10-07
ယခင်: အသံလွှင့်အိန္ဒိယမှာမောရှေနှင့် CORE.4 Lite ကို Demo မှ NCS Techno စနစ်များနှင့်အတူ GB ကို Labs ကမိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: ယင်း၏အသံ Monitorin Solutions နှင့် NAB နယူးယော့ 2019 မှာထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များမှ TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြအပ်ဒိတ်များ